Ma jiraan wax software la mid ah ama ka duwan si Boilsoft?
> Resource > bedelan karo > kasta oo lagu talinayo Boilsoft Alternative?
La mid ah si ay u Boilsoft, ee Wondershare Video Converter Ultimate sababtana fasiraad u download labada nidaamka ka hawlgala Windows iyo Mac. Wax kale oo aan ahayn, waxa ay sidoo kale la dhexgeliyey iyaga u gaar ah ciyaaryahan warbaahinta u gaar ah oo la dhisay-in editor. Si kastaba ha ahaatee, kala duwan ee qaabka file aqbasho in la soo taageero kala duwan arrin si weyn. Si aad u leedahay in si fiican loo fahmo waxa aan doonayaa inaan faahfaahin ka dib on, waxaa lagula taliyaa in aad kala soo bixi version tijaabo ah Wondershare Video Converter Ultimate ah xaq halkan . Waxaa ku caawin doonnaa in aad ku dhawaad ​​inta badan ka sahlan ula interface ka furan halka ay awoodaan in ay is barbar sifooyinka dheeraad ah oo aad ku seegay in Boilsoft maraan; sida fursad u abuuro ama DVD ah iyo sidoo kale downloads toos ah loo jecel yahay goobta geeyo online gubi.
1 Dheellitir goobaha
Marka Wondershare Video Converter Ultimate ayaa la bilaabay, waxaad si fudud u jiidi-iyo-hoos u kartaa video files gal interface ka. Fiiri ah ee Creech casriga ah ee qaabab video taageeray oo aad noqon doonaa yaabeen ay heer sare ah oo waafaqsan. Ha welwelin ku saabsan sida badan files aad u bedeli karaan, maxaa yeelay, waxaad samayn kartaa in yaalla ilaa 30X dhakhso ee xawaaraha, wajihi doonta tayada sameecadda ah.
Haddii aad u baahan tahay in la beddelo qaraarka, heerka jir garaaca video ee, qayb ama iwm, guji kaliya Settings waa dhab kor ku xusan loogu badalo button. Haddii kale, ka soo xusho horena ku salaysan aad loo maqli doorbidayso (akhri wax dheeraad ah oo ku Tallaabada 3).
Ka hor inta aan diinta, waxa kale oo aad ka bedel kartaa videos by falinjeeerka soo goobaha la rabin ama qaybo, waxaa noola, darto saamaynta gaar ah shaqsinimo dheeraad ah ama xitaa ku dar watermarks iyo geliso subtitles aad. Waxay ka dhigaysa mid si sahlan si ay u awoodaan in ay u arkaan isbedelka la sameeyo in ay Falanqeynta-waqtiga dhabta ah.
Marka aad guji badalo , waxaad yeelan doontaa in aad u aragto horumar diinta ee sida lagu muujiyey by shaashadda hoose. Sidoo kale jira in hako icon haddii aad u baahan tahay in aad diinta ugu joojiyo.
3 Beddelaan u playbacks on kombuyuutarrada gacanta
Uma baahnid in aad noqon khabiir ku ah si ay u awoodaan inay ku raaxaystaan ​​aad videos. Ha Wondershare go'aan Video Converter Ultimate oo kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad dooratay ee qalabka la qaadi karo, brand ama model ka liisaska presets heli karo. Si fudud guji Qaabka Output iyo aad u yeelan doontaa in ay caleenta iyada oo qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan iyo sidoo kale qalabka la qaadi karo.
4 muuqaalada dheeraad ah
Fadlan raac naga Sidee-Si ee guide on macluumaad dheeraad ah iyo Casharrada sida aad u abuuri karaan ama gubi videos gal DVD ah iyo sidoo kale download online videos.